अप्रत्यक्ष करले धनी–गरीब हेर्दैन | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता अप्रत्यक्ष करले धनी–गरीब हेर्दैन
on: September 03, 2018 अन्तरवार्ता, वार्षिकोत्सव बिशेष
डा. युवराज खतिवडा, सङ्घीय अर्थमन्त्री
विधानमार्फत सङ्घीयता संस्थागत भएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत देशमा वित्तीय सङ्घीयता लागू भएको छ । नयाँ सरकारमा अर्थशास्त्रका ज्ञाता तथा सफल गभर्नरको परिचय बनाएका डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको कमाण्ड सम्हालेका छन् । उनकै नेतृत्वमा नयाँ वित्तीय संरचनामा बजेट आएर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ । तर त्यसपछिका दिनमा मुख्यगरी करका प्रावधान, प्रक्रिया र अधिकारबारे केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा व्यापक बहस, विवाद र छलफल भइरहेको छ । हुन त सङ्घीय बजेटमार्फत करको माध्यमबाट जनता र निजीक्षेत्रलाई कस्ने कामको शुरुआत डा. खतिवडाले नै गरेका हुन् । यद्यपि कर, राजस्व र विकासका विषयमा उनको आफ्नै धारणा र विश्लेषण छ । प्रस्तुत छ कर, त्यसको प्रभाव र आउने परिणमको सेरोफेरोमा रहेर सङ्घीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग आर्थिक अभियानका रञ्जु काफ्लेले गरेको कुराकानी :
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको वामपन्थी सरकारमाथि जनतालाई करको भारी बोकाएको आरोप छ नि ?
सङ्घीय सरकारले अघि सारेका करका प्रावधानबारे संसद्मा लामो बहस, छलफल भएको थियो । संसद्मा निर्वाचन जितेर आएका सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको सहभागिता हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई आरोपित गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म । अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा जनतालाई सबैभन्दा बढी भार पार्न सक्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हो भनेर त्यसमा कुनै पनिवर्तन गरिएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यवसायीलाई दिएको छूटचाहिँ फिर्ता लिइएको हो । छूट फिर्ता लिनु भनेको जनताले तिरेको कर व्यवसायीलाई अबदेखि खान पाउँदैनौ है भनेको हो, जुन जनतासँग त्यति धेरै सरोकारको विषय होइन ।
प्रत्यक्ष करका सन्दर्भमा सरकारले दर बढाएर जसले आम्दानी गरेको छ, उसले कर तिर्नुपर्ने तर आम्दानी नभएकाहरूले नतिरे पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई प्रगतिशील कर प्रणाली भनिन्छ । मेरो बढी आम्दानी थियो, सरकारले बढी कर लगायो भन्न पाइन्छ । त्यो स्वाभाविक हो । कमाइ नहुनेहरूले कम कर तिरे पनि हुन्छ । प्रगतिशील कर प्रणालीले आम जनतालाई न्याय दिन्छ । सरकार न्यायको पक्षधर हो ।
आम जनतालाई मार पर्ने अप्रत्यक्ष करको दरले हो । त्यसमा पनि खासै परिवर्तन भएको छैन । केही वस्तुको भन्सार दरमा परिवर्तन भएको छ । विलासिताका वस्तु र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरूमा भएको करको दर समायोजनले आम जनतालाई खासै प्रभाव पार्दैन । भन्सार दर समायोजन गर्दा खासगरी व्यापार घाटा कम गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरूमा मात्र गरिएको छ, जसले आम मानिसलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
त्यसैले सङ्घीय बजेटका कारणले करको बोझ बढेको होइन । स्थानीय तहले लगाएको करका कारण बहस छेडिएको हो । विगतमा यस्ता कर थिएनन् । स्थानीय तहले पहिलो पटक करको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै छ । त्यसैले अलिकति बढी चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । सङ्घले स्थानीय तहले लगाएको कर कानूनविपरीत भए फिर्ता लिन पहल गर्ने, कानूनसम्मत लगाइएका करका भार अनुचित देखिए पुनरवलोकन गर्न र स्थानीय सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन पहल गर्छ ।
स्थानीय तहले लगाएका कर उपादेयता नभए फिर्ता पनि हुने रहेछन्, सङ्घको कर सामान्यतया फिर्ता हुँदैन । त्यसैले कर प्रणालीको अप्ठ्यारो सङ्घले सृजना गरेको हो भनिन्छ, त्यस्तै हो ?
तर्क ठीक हो । तर सङ्घले करका प्रावधान हेरफेर गर्दा, कर लगाउँदा विभिन्न अध्ययन गर्दछ, संसद्मा छलफल हुन्छ र लागू हुन्छ । सङ्घीय सरकारले कर तिर्ने क्षमता भएका समान आम्दानीका लागि समान करको सिद्धान्त लागू गरेको छ । त्यसैले सङ्घले लगाएका कर फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । तर स्थानीय तह भर्खर निर्माण भएको छ । पहिले नभएको व्यवस्था अभ्यास गर्नुपर्नेछ । लामो समयपछि भएको निर्वाचनले जनप्रतिनिधिहरूमा उत्साह थपेको छ । धेरै काम गर्न स्रोतको खाँचो पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले अहिले अप्ठ्यारोजस्तो देखिएको हो ।
सङ्घले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्दछ, अप्ठ्यारो सृजना गर्दैन । सङ्घका कारण समस्या भएको पनि होइन । स्थानीय तहमा भएको नयाँ अभ्यासलाई बढी चर्चा गरिएको हो । सबै स्थानीय सरकारले स्वायत्त ढङ्गबाट काम गर्न÷गराउन पाउँछन् । काम गर्ने क्रममा हुने कानूनविपरीतका क्रियाकलाप सुधार्दै लाने, कानूनसम्मत ढङ्गबाट लगाइएका करमा भार बढी देखिए पुनरवलोकन गर्न र स्थानीय सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन सङ्घले तत्परता भने देखाउँछ ।
वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकाले लगाएको कर फिर्ता लिए । अरूले पनि त्यसै गरे भने ?
ती महानगरले कानूनविपरीत लगाएका कर फिर्ता लिएका हुन् । अनि करदाता करको भारमा असहज देखिएकाले केही कानूनसम्मत कर पनि अहिलेलाई स्थगन भएको छ । कानूनसम्मत करका दरमा पुनरवलोकन हुन सक्छ, फिर्ता हुँदैन । कानूनविपरीतका कर फिर्ता हुन्छ । दोहोरो कराधार क्षेत्रमा एकद्वार प्रणालीबाट कर सङ्कलन हुन्छ । सबै तहका सरकारले कानूनसम्मत कर सङ्कलन गर्ने र करदातालाई संरक्षण दिने हो । त्यसैअनुसार वातावरण बन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट समयमै खर्च हुन्छ र लक्षित आर्थिक वृद्धिसमेत हासिल हुन्छन् भन्ने आधार के–के हुन् ?
पहिलो आधार जेठ १५ मा बजेट ल्याएर असारमा २७ कार्ययोजना तयार भइसक्नु हो । बजेट सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश कार्यविधि तयार भइसकेका छन् । धेरै समय लाग्ने गरेका कार्यविधि समयमा तयार हुँदा सार्वजनिक खरीद तथा ठेक्कापट्टाका काम निरन्तर चल्छ । कर्मचारी समायोजनको जोखीम छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
अर्काे सबै तहका सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जवाफदेही हुन नपर्ने/नहुने परम्पराको पनि अन्त्य भएको छ । कमजोर निर्माण सामग्री, गुणस्तरहीन कामलाई जनप्रतिनिधिले तत्काल खबरदारी गरिहाल्छन् । तेस्रो आधार भनेको सरकारले निजीक्षेत्रलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनलाई टेकेर हामीले समयमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै छौं । अनि अनुगमन प्रणाली पनि बलियो बनाउँदै छौं ।
स्थानीय तहले धमाधम कर लगाइरहँदा अर्थ मन्त्रालयले के हेरिरहेको छ ?
स्थानीय तह आफैमा एउटा स्वायत्त निकाय हो । कानूनतः कर लगाउने अधिकार पाएको निकायलाई सङ्घीय सरकारले चुनौती दिने कुरा भएन । मन्त्रालयले त्यस्ता निकायलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कर लगाउँदा कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्रमा मात्र कर लगाउन अनुरोध गर्ने, कानूनविपरीत लगाइएका कर फिर्ता लिन सचेत गराउने काम गरेको छ ।
साझा अधिकार सूचीका कराधार क्षेत्रमा केही अन्योल हो, जसका लागि एकद्वार प्रणालीबाट कर उठाउने र बाँड्ने सहमति कायम भएको छ । कर कसरी उठाउने र बाँड्नेबारे नमूना कानून बनाएर पठाएका छौं । उठेको कर बाँड्दा कर उठाउनेलाई ६० प्रतिशत र हिस्सा बुभ्mनेलाई ४० प्रतिशतले बाँडफाँट हुन्छ । जुन कर जसले उठाए पनि एकल विन्दुबाट उठाउने हो । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित करहरूमा भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क सङ्घले उठाउने हो । अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको अंश तल्ला सरकारलाई पनि दिने हो । त्यो बाँड्न पनि थालिसकेका छौं ।
मुख्य कुरा के हो भने स्थानीय तह हिजो गाउँपालिका थिए, आज नगरपालिका भएका छन् । हिजो मालपोत तिरेकाहरू आज जमीन कर तिर्ने भए, हिजोसम्म धुरीकर नतिरेकाहरू आज सम्पत्ति करको दायरामा आएका छन् । करको दायित्व थपिएको छ । अनि भर्खर निर्माण भएको स्थानीय तहलाई पनि पूर्वाधार निर्माणदेखि संस्थागत संरचना बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले ती निकायहरूले उदार भएर कर लगाइरहेका छन् । समस्याको खास कारण यही हो । त्यसैले कुनै पनि तहको सरकारले करदाताको कर तिर्ने क्षमता हेरेर मात्र कर लगाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । क्षमतामै ह्रास आउनेगरी कर लगाउनु हुँदैन । स्थानीय तहमा मूलतः जनप्रतिनिधि र जनताबीच समन्वय गर्दै जानुपर्छ ।
शुल्कका नाममा उठाइएका दस्तूरलाई आम मानिसले करका रूपमा बुझेका छन्, आम बुझाइ र सरकारको व्याख्यामा विरोधाभास भएन ?
शुल्क र करबीच नाम मात्रै फरक हो । पैसा तिर्नुपरेपछि मैले शुल्क तिरेँ कि कर तिरेँ भन्ने हुँदैन । दुवै कर नै हो । निश्चित वस्तु वा सेवा उपभोग गरेबापत तत्कालै तिर्ने मूल्य शुल्क हो । शुल्कले तिर्नेलाई मात्र लाभ दिन्छ । त्यही कर राजस्व प्रणालीमा जम्मा हुन्छ र विभिन्न क्षेत्रमा बाँडिन्छ भने त्यसलाई कर भनिन्छ । आयकर, सम्पत्ति करलगायत कर राजस्वका स्रोत हुन् । सोही स्रोतबाट सडक, पुल निर्माणको काम हुन्छ । अनि करदाताले करबापत तिरेको विकासको लाभ लिने धेरै हुन्छन् । करदाताले तिरेको शुल्क राजस्व प्रणालीमार्फत परिचालन हुन्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खर्च हुन्छ भने त्यो कर हो भने पनि हुन्छ । दुवैको बोझ उस्तै हो ।
केही समयअघि अमेरिका भ्रमणका क्रममा तपाईंले त्यहाँका व्यापारीसँग नेपाल दक्षिण एशियामै प्रतिस्पर्धी करको दर भएको देश भन्नुभयो । त्यसको ठोस आधार पनि बताइदिनुस् न ?
हो, त्यहाँका लगानीकर्तालाई संस्थागत आयकरको सन्दर्भमा मैले नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी करको दर भएको देश हो भनेको हुँ । नेपालमा लगानीकर्ताले तिर्ने कर्पाेरेट कर उद्योगका लागि २० प्रतिशत र अन्य व्यवसायका हकमा २५ प्रतिशत तिरे पुग्ने व्यवस्था छ । यो दर दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धी दर हो । भन्सारमा पनि औसत ११ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । करीब ३ चौथाइ वस्तुको भन्सार महशुल १० प्रतिशतभन्दा तल छ । त्यसैले हामी धेरै कर लाग्ने मुलुकमा पर्दैनौं ।
आम जनताको कर तिर्ने क्षमता र तत्परता नबढी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करको भार बढ्दा फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा हुँदैन ?
त्यस्तो हुँदैन । पहिले प्रभावकारी करको दर १५, २५ र ३५ प्रतिशत थियो । अहिले १०, २०, ३० र अधिकतम ३६ प्रतिशत भएको छ । त्यो पनि २० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेहरू मात्र ३६ प्रतिशत कर तिर्नेमा पर्नुहुन्छ । यो पहिलेको प्रणाली नै हो । सरकारी आम्दानीको सबैभन्दा मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर हो, त्यो बढेको छैन । त्यसो हुनाले भारको कुरा होइन ।
मुख्य कुरा कर सङ्कलन गर्नेले कसलाई कर लगाउने कसलाई छाड्ने, मूल्याङ्कन विधि के हुने, कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ ।
बजेटले ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, त्यसको प्रमुख स्रोत भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका उपभोगमा आधारित अप्रत्यक्ष कर नै हो । यसले निम्न आय भएर गरीबीको रेखा वरिपरि रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन ?
अप्रत्यक्ष करले धनी गरीब हेर्दैन । कर लगाउनेले विवेक प्रयोग गरेर गरीबले प्रयोग गर्ने वस्तुमा सकभर अप्रत्यक्ष कर पनि नलागोस् भनेर सचेत हुने हो । प्रत्यक्ष करमा मात्र जान अहिले नै करको आधार फराकिलो भइसकेको छैन । कृषिमा आयकर थिएन, अहिले प्रदेशले लगाउने भन्ने छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने कृषिमा आयकर नलाग्ने, अनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ । आर्थिक क्रियाकलापहरू अनौपचारिक छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाटो परिवर्तन गर्न पनि कर आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा अल्पकालीन/मध्यकालीन समयसम्म अप्रत्यक्ष कर पनि लगाउनुपर्छ । सरकार सञ्चालनको बाध्यता हो । अर्थतन्त्र विकास हुँदै गएपछि प्रत्यक्ष कर नै राजस्वको ठूलो हिस्सा हुन्छ । अप्रत्यक्ष करको दायरा घटाउँदै लान सकिन्छ ।
बजेटमार्फत आएका करका प्रावधानले आर्थिक असमानताको खाडल बढाउँदैन ?
प्रगतिशील कर प्रणालीको विशेषता नै आय असमानता घटाउने हो । कर प्रणालीले आयको असमानता बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुरामा करलाई मात्र हेरेर पुग्दैन खर्च पनि हेरिनुपर्छ । उठेको कर धनी वर्गका लागि वितरण भएको छ कि गरीब वर्गलाई त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । करको लाभ कुन वर्गले पाएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । बजेट वितरण गर्दा धनीहरू मात्र धनी भए भने निश्चित रूपमा आय असमानता बढ्छ । हाम्रो बजेट देख्नु नै भएको छ, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यका कार्यक्रम छन्, जसमा हुने खर्चले आर्थिक असमानता बढाउँदैन, घटाउँछ । त्यसैले यसमा त्यत्ति धेरै चिन्तित नबनौं ।
ननफाइलरको सङ्ख्या पनि ठूलै छ, सरकारले ट्याक्स नेटमा भएकालाई घाँटी च्यापिरहने तर नेटबाहिर रहेकालाई नेटमा ल्याउन प्रयास नगर्ने गरेको होइन ?
विगतमा भयो होला, अब त्यस्तो हुँदैन । कर बुझाउन बाँकी भएकालाई समय दिएर फरफारक गर्न अनुरोध गर्ने, विवरण नबुझाएकालाई ताकेता गर्ने गरेका छौं । करको विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति घट्दै जान्छ । कम्पनी, गैरसरकारी र अन्य कतिपय संस्थालाई पनि करको दायरामा ल्याउँदै छौं ।
कतिपय दैनिक आवश्यकताका वस्तु उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ आयातमा दिइँदै आएको कर फिर्ता भएको छ, यसले कर प्रणालीलाई रिग्रेसिभ बनाएको छैन ?
मूल्य अभिवृद्धि कर जनताले तिर्ने तर तिरेको करको लाभ भए/नभएको सुनिश्चितता नहुने अथवा कति तिरेको थियो सरकारले कति फिर्ता दिने भन्ने स्पष्ट हिसाबसमेत नहुने भएकाले फिर्ता लिइएको हो । मोबाइलमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको कुरा थियो, उखु, घिउ–तेल र चियामा कर फिर्ता दिने भन्ने थियो ।
अहिले उखु उत्पादकलाई सोझै अनुदान दिने उद्योगलाई नदिने, चियामा उत्पादकलाई दिने विक्रेतालाई कर छूट नदिने भनिएको हो । घिउ–तेलजस्ता कृषि उत्पादनमा पनि उत्पादकलाई अनुदान दिने हो । पशुजन्य पेशा, तेलहन बालीमा पनि अनुदान दिने हो । आयातित वस्तुमा आधारित भएर कृषिजन्य उद्योग कति वर्ष चलाउने ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा छौं । भटमास, तोरी, मकै, चामल, सूर्यमुखी आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गर्दा दिगो हुँदैन । त्यसैले कृषि उद्योगका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादकलाई अनुदान दिने हो । मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिँदैनौं । कपडा उद्योगका विशिष्ट समस्यालाई हेरेर थप केही राहत दिने भन्ने छ ।
स्थानीय तहमा देखिएका समस्या वित्त आयोगमार्पmत समाधान गर्ने भनिएको थियो । आयोग बनाउनेभन्दा पनि मन्त्रीस्तर र सचिवस्तरमा अलग अलग समिति बनेका छन् । आयोगको भूमिका कमजोर पार्न खोजिएको हो ?
वित्त आयोग राजस्व र अनुदानको बाँडफाँट गर्ने आयोग हो । आयोगले करको दर तय गर्ने होइन । के–के मा कर लाग्छ÷लाग्दैन भनेर निक्र्याेल गर्ने पनि होइन । आयोगले सङ्घले उठाएको पैसा प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घलाई बाँड्ने विधि बनाउने र समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान वितरणको मापदण्ड बनाउने हो । त्यो बजेट निर्माणका क्रममा भइसक्यो । अबचाहिँ आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउने, लाभक्षेत्र निर्धारण गर्ने हो । त्यो काम भइरहेको छ । स्थानीय तहमा देखिएका प्राकृतिक स्रोत विवादलाई आयोगले हेर्न सक्छ । बाँकी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारको हो ।
वित्त आयोगको भूमिका नै कमजोर हो कि कर बाँडफाँट प्रणालीमै समस्या हो ?
संविधानले बनाएको आयोगको भूमिका कमजोर हुँदैन । अनि आयोगले अधिकार क्षेत्रबाहिरको अधिकार खोज्नु पनि हुँदैन । अहिले आयोग गठन नहुन्जेल मन्त्रालयले प्रशासनिक तवरको काम गरेको हो । लामो समयसम्म संसदका समितिहरू गठन नहुनुमा सरकार मात्र जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि होइन । सार्वजनिक सुनुवाइ समिति भर्खर गठन भएको छ । गृहकार्य भइरहेको छ, वित्त आयोग पनि छिट्टै गठन हुन्छ । आयोग गठन हुँदैमा सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने होइन, स्थानीय तहमा कर लगाउँदा विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । मानिसहरू कर तिर्न अभ्यस्त भएका छैनन्, अभ्यस्त नबनाई करका कुरा धेरै ग¥यो भने प्रतिक्रिया धेरै हुन्छ । त्यति मात्र कुरा हो अहिले । वित्त आयोगले कर वितरणको सन्दर्भमा अन्तर–सरकारी वित्त ऐनले भनेको जस्तो र अर्काे सूत्र बनाएको छ । त्यसमा जनसङ्ख्या, भूगोल, दुर्गमता, मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार मानेको छ । आयोगको सूत्रले आम रूपमा सन्तुष्टि दिएको छ । भूगोल र जनसङ्ख्याको विषय छलफलको विषय थियो । यो सूत्रलाई भने आयोगले आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ ।
पछिल्लो डेढ दशकमा औद्योगिक उत्पादकत्व निकै कमजोर भएको छ, त्यसलाई बढाउने के–कस्ता कार्यक्रम छन् ? औद्योगिक क्षेत्रको सबलीकरणका लागि अर्थको भूमिका के हुन्छ ?
औद्योगिक क्षेत्र सङ्कुचित हुने केही कारणहरू छन् । पहिलो त कतिपय उद्योग आयात प्रतिस्थापक मात्र थिए टिक्न सकेनन् । अर्काे कोटा प्रणालीमा आधारित उद्योग द्वन्द्वले थिलोथिलो पारेका बेला विस्तार हुन सकेनन् । तेस्रो कारण विद्युतीय ऊर्जा आपूर्तिको अभाव हो । उद्योगहरूले माग गरेको ऊर्जा पाएनन् । राजनीति अस्थिर भएकाले लगानीकर्ता पनि आश्वस्त भएनन् । त्यसैले औद्योगिक जग कमजोर भएको हो । पछिल्लो समय गतिशील भएको छ । सुधारिँदै जान्छ ।
इतिहासकै बलियो सरकारसँग अन्तरराष्ट्रिय समुदाय विश्वस्त हुन सकेन, नीतिमा प्रष्टता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजे भनिएको छ, सरकार कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
विश्वका कुनै पनि राष्ट्रको निर्वाचित सरकारसँग अन्तरराष्ट्रिय समुदाय सशङ्कित हुँदैन । हामीसँग पनि भएका छैनन्, राजनीतिक स्थिरता भयो भनेर उत्साहित छन् । विश्व बैङ्कले लगानी दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको तपाईंले थाहा पाइहाल्नु भएको छ । एशियाली विकास बैङ्क पनि लगानीको अवसर सदुपयोग गर्छांै भनिरहेको छ । एआईआईबी (एशियन इन्फ्राइष्ट्रक्चर इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क)ले परियोजना माग गरेको छ । अमेरिकी सरकारको एमसीसी (मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन)को कम्प्याक्ट पाउने थोरै मुलुकहरूमा नेपाल पर्दछ । त्यसको छिट्टै कार्यान्वयन हुँदै छ ।
खर्च गर्ने क्षमता त कमजोर नै छ, बढेको सहयोगको समुचित उपयोग हुन्छ ?
आयोजना परिपक्व बनाउने र छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने हो । अहिले दातृ निकायहरूले धेरै सहयोग गर्छु भनेको पनि यो सरकारले खर्च गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वस्त भएरै हो । संस्थागत संरचना र सरकारको विकासको दीर्घकालीन सोच उपयुक्त हुँदा नै दातृ निकायहरू सहयोग गर्न तत्पर हुन्छन् । विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न सहयोगको समुचित उपयोग हुन्छ ।
नयाँ सरकार र विज्ञ अर्थमन्त्रीसँग अपेक्षा पनि धेरै भएको हो कि ? पछिल्लो समय निजीक्षेत्र हच्किएको छ, सरकारले निजीक्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको हो ?
अपेक्षा स्वाभाविक हो । सार्वजनिक पदमा लामो समय रहेकाले मेरा आफ्ना केही जिम्मेवारी छन् । मैले अर्थतन्त्रका पार्टपूर्जा, अवयवहरू खस्कन दिनु हुँदैन । मेरो आग्रह छ, अहिले नै धैर्य नगुमाउनुहोेस् संविधानले दिएका सबै मौलिक हक स्थापित गर्छाैं । राम्रो काम गरिरहेका छांै छिट्टै नतीजा पनि देखाउँछौं । पहिलो वर्ष कोर्स करेक्शन गर्ने हो । अर्काे वर्ष सुधार देखिन्छ । निजीक्षेत्रका छाता सङ्गठनले सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई शेयरबजारप्रति असहिष्णु भएको आरोप लाग्ने गरेको छ, खासमा अर्थमन्त्री शेयरबजारप्रति असहिष्णु भएको कि अर्थमन्त्रीप्रति शेयरबजार असहिष्णु भएको हो ?
पूँजीबजारको सुदृढ र सङ्गठित विकास गर्न लागिपरेको मान्छे हो म । केन्द्रीय बैङ्कको इतिहासमा सम्भवतः पूँजीबजारको सबैभन्दा धेरै अध्ययन मैले नै गरेको थिएँ । मलाई शेयरबजारको सबल र दुर्बल पक्ष थाहा छ । शेयरबजारमा थप संस्था चाहिन्छ । पूँजी र कारोबारको आकार बढाउँदै लैजानुपर्छ, कारोबारमा सहजता पनि ल्याउनु छ । यसबीचमा धेरै संस्थागत सुधार भइरहेका छन्, संस्थाहरूको पूँजी संरचना पनि परिवर्तन भएको छ । त्यसैले शेयरको मूल्य तलमाथि भएको हो । पूँजीबजारको विकासबाटै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो । लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुनु भए हुन्छ, बजार विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
नयाँ व्यवस्थामा वित्तीय अनुशासन कसरी कायम हुन्छ ?
राजस्व सरकारले उठाएपछि बजेटका रूपमा प्रस्तुत भएर अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्ने कुरा हो । कार्यक्रम एकातिर खर्च अर्कोतिर हुने अनि नतीजा त झन् देख्दै नदेखिने परम्पराको अन्त्य नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । आर्थिक अनुशासन हामी कायम गराएरै छाड्छौं । बजेट एउटा बनाउने कार्यक्रम अर्काे स्वीकृत गर्ने खर्च झन् अन्तै गर्ने उपलब्धि पनि नदेखिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।